DIGNIIN! Xafiiska Qurbajoogga wuxuu uga Digayaa Dulshada Tuug ku qadhaabata Magaca Jaalliyadaha Somaliland
“Muwaadin iska jir inaad rumaysato qof aanad garanayn oo telefoon kugula soo hadla”
Warbaahinta kala duwan ee dunidan casriga ah ee aaladda internet-ku isku xidhayxo, isticmaalka baraha bulshada iyo idaacadaha la iska arko ama TV-yada faraha badan iyo hababka dirista lacagaha ee elaktaroonikada ahi waxay u fududeeyaan ama u sahlaan qaarka mid ah tuugta inay uga faa’iidaystaan falal ay ku dhacaan bulshada,iyagoo markay xogtooda waxka ogaadan, waxna isku toos toosiyaan been ah lacago kaga qaata loogu diro adeegyada ZAAD ama E-DAHAB.
Waxaa soo baxay niman tuug ah oo marka hore kaa baranaya warbaahinta iyagoo tusaale ahaan dhinaca jaalliyadaha xog ogaal u noqonaya oo warbaahinta kala soconaya hawlqabadyada iyo hadba hawlaha shaqo ama waxqabad uu ururka ama qofku ku foogan yahay ama uu inta badan u dhaqdhaqaaqo ama laga fili karo, dhinaca gudaha dalkana bartilmaameed ka dhigta ururada samafalka waddaniga ah ee iyaguna ku hawlan inay waxka caawiyan qaybaha bulshada ee nugul ama baahan iyo xarumaha adeegyada bulshada, jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada, cisbitaallada, dawladaha hoose iyo masuuliyiinta hay’adaha dawladda iyo dadka ganacsatada yaryar mararka qaar. Tuugtadani waxay sidoo kale jabsan karaan Email-kaaga si ay u ogaadaan dhinacyada aad wada xidhiidhaan iyo hawlaha aad ka wada socotaan.
Tuugtani waxay kaala soo hadlayaan telefoonka waxaanay kuu sheegayaan inay qalab waxbarasho ama caafimaad ama noocyo kaleba kaaga sidaan hebel oo qurbajoog ah ama jaalliyad heblaayo. Mararka qaarkood ka hor intaanu tuuggu kula soo hadal waxaa kaaga soo horraynaya tuug kale oo kuu sheegaya inuu jiro qof kaaga sida deeq qalab ah qurbajoogga oo kula raadinaya, waxaanu isku kiin xidhayaa tuugga kale. Wuxuu kuu sheegayaa magaca ururka jaalliyadda ama khayriga ah ama guddoomiyaha jaalliyadda ama qof kale oo laga yaabo inaad taqaan ama aanad aqoon oo ka soo jeeda degmada aad joogto.
Tuuggani wuxuu ugu dambayn hadalkiisa kaa codsanayaa inaad usoo dirto kharash kooban oo inta badan $30 illaa $200 ku siman oo uu kuu sheegayo inay wax kaga xidhan yihiin markaas xagga Dekedda ama Madaarka isagana uu kaadhkii ATM-ku u shaqayn waayay ama aanay markaas lacagi ugu jirin isaga sida uu hadalka kuugu dhigayo. Isla lambarkaas uu kula hadlayo ayuu ku odhanayaa ku soo dir ama siday dad badan ku sameeyeen wuxuu ku sheegayaa lambar kale oo sarifle ama meherad kale oo u dhaw. Markay u suurtagasho tuugadani, haddaad ugu dirtay lambarkii uu kaala soo hadlay wuu xidhayaa markaba waanu ka guuraya, haddii uu lambar meheradeed dhexmarsadayna markaad la hadasho qofkii lahaa waxba kuuma qaban karo waayo wuxuu ka mid ahaa uun dadkii waxka sariftay ama ka iibsaday maalintaas. Lama hubo inaad Shirkadda Isgaadhsiintu kula raadin karto ama sida badan qofka la khiyaameeyay wakhtiba uma hayo inuu nidaamka sharciga waafaqsan u maro daba-galka iyo baadhista fal dambiyeedka dhacay ee lacagta lagaga qaaday.
Marar kala duwan waxay dad ku dhaceen ama ku sigeen inay ku dhacaan magaca Jaalliyadda Somaliland ee Washington DC https://www.somalilandusa.org/ oo ay astaanteeda ugu direen WhatsApp-ka. Guddida Jaalliyadaas oo ogaatay ayaa marar kala duwan warbaahinta kala hadashay bulshada. Tuuggadani muddo dheer ayay jirtay balse hadda way ku soo badatay dalka.
Hadaba Xafiiska Qurbajoogga ee Wasaaradda Arrimaha Debadda & Iskaashiga Caalamiga ah JSL oo cabashooyin badan oo tuugada noocan ahi ka soo gaadhayaan dad kala duwan oo ururo khayri ah, dawlado hoose, jaalliyado iyo dad kale oo lagu dhacay ama ku sigtay in qaabkan lagu dhacaaba ka mid yihiin, wuxuu uga digayaa dhammaan bulshada Somaliland inay ka taxadiraan halista tuugta noocan ah ee ku qadhaabta magaca jaalliyadaha.
Iska jir oo ka taxadir inaad rumaysato qof aanad garanayn oo telefoon kugula soo hadlay waxkasta uu sheegayaba, ogowna waa tuug kugu socda;
Haddii qof aanad garanaynini kula soo xidhiidho kuuna sheego inuu hebel oo qurbajoog ah ama jaalliyad heblaayo waxkaaga sido, ha rumaysan hadalkiisa ee la xidhiidh guddida jaalliyaddaas haddaad garanayso ama haddii kale la soo xidhiidh Xafiiska Qurbajoogga Tell: 063 4826166;
Ka taxadir inaad sii gasho farrimaha xayaysiiska iyo beenta ah ee laguugu soo diro WhatsApp-ka taasoo marin habaabin ah iyo tuugo lagaaga jabsan karo lambarkaaga si xogtaada loo helo oo adiga laftaada ama cid kale loogu dhaco;
Ka waantow inaad lacag uun isaga dirto qof aanad aqoon u lahayn;
Shirkadaha Isgaadhsiinta iyo Warbaahintuba waa inay bulshada uga digaan tuuggadan.
Xafiiska Qurbajoogga Somaliland
← DAAWO: Madaxweynaha JSL MD.. Muuse Biixi oo kulan hadhimo-sharafeed ah ku maamuusay xubno kamid ah bulshada aragga naafada ka ee ku dhaqan dalka Somaliland